Lacag-bixiye: Lacag u yeelo haraagaaga, Juqraafkaaga ama Bixitaankaaga Taraafikada | Martech Zone
Lacag-bixiye: Lacag u yeelo haraagaaga, Juquraafigaaga ama Bixitaanka Gaadiidka
Khamiis, Agoosto 25, 2016 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Rumayso ama ha rumaysan, booqde kasta oo goobtaada jooga ayaa ah ma rajo. Haddii aad lacag uga dhigtay bartaada xayeysiis dhinac saddexaad ah, goobahaas xayaysiisyada ahi waxay u baahan yihiin sicir beddelaad si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba oo u soo bandhiga xayeysiis booqdayaasha ku habboon. Tirada dareenka iyo goobaha boggaaga waxaa loo yaqaan xayeysiiskaaga Liiska.
Waa maxay taraafikada haraaga ah?
Maaddaama xayeysiisyada la iibsaday la bartilmaameedsanayo, ka warran bidixda soo booqdayaasha aan bartilmaameedka ahayn? Gawaaridaas waxaa loo yaqaannaa haraaga taraafikada. Gawaarida haray ayaa dhibaato ku ah daabacayaasha khadka tooska ah maxaa yeelay waa taraafikada ay sida caadiga ah awood u yeelan waayaan inay lacag sameeyaan.
Suuqa maanta ee xayeysiinta internetka, qaar badan oo daabacayaal ah, xayeysiiyayaal, iyo shabakadaha xayeysiiska ayaan si buuxda uga faa'iideysan mobilada iyo taraafikada webka ee ay ka shaqeeyaan maalin kasta. Intaa waxaa sii dheer, booqdayaasha ka socda wadamada aan bartilmaameedka ahayn ayaa gebi ahaanba u tagi kara qashin iyo fursado si ay lacag ugu helaan bogagga xayeysiinta ee ka tagaya taraafikada inta badan lama ogaan.
Maaddaama ay aad u adkaan karto in la daboolo qayb kasta oo wax laga qabto xagal kasta marka la isku dayayo in lacag laga dhigo kuwa aan la bartilmaameedsanin, ka bixitaanka, ama taraafikada hadhay, Monetizer waa otomaatig, xalka barnaamijka ugu fiican ee looga hadlayo arrinta.
Lacag-bixiye waxay u suurta gelineysaa daabacayaasha inay soo saaraan ololeyaal gaar ah, oo si heer sare ah loo habeeyay si ay lacag uga helaan taraafikada in ka badan 150 dal. Nidaamku wuxuu adeegsadaa mid Isku xirka Smart Global. Barashadooda mashiinka lahaanshaha vAuto algorithm waxay tixgelineysaa goobta booqdayaasha, nidaamka qalliinka, iyo xamuulka - oo ay weheliyaan arrimo kale oo badan - si loogu soo saaro eCPC-yada aan caadiga ahayn (kor u qaadista qiimaha-guji) wada-hawlgalayaashayada.
Barnaamijkeenu wuxuu sii wadaa inuu soo saaro natiijooyin aan caadi ahayn, iyadoo wada-hawlgalayaal badan ay soo saaraan kumanaan kun oo dakhli maalin kasta taraafikada laga yaabo inay si kale ula qabsadeen. Maaddaama aan diirada saareyno tiknoolajiyada ka dambeysa barxadda, hagaajinta ololeyaasha, iyo xiriirada cusub ee xayeysiistayaasha, waxaan ku faraxsanahay inaan aragno waxa mustaqbalka u ah Monetizer iyo la-hawlgalayaashayada! Max Tetrault, Iskaashatada Maamulka, Lacag-bixiye
Lacag-bixiye waxay hadda lacag kasameysaa ~ 120 milyan oo gujin / maalin iyo ~ 3 bilyan oo guji / bishii oo kasocda 150+ dal. Waxay awood u leeyihiin inay lacag ka helaan labada mobiil iyo webba (labadaba guud iyo taraafikada dadka waaweyn). Xiriirintooda Global Smart waa mid jilicsan, oo ay ku jiraan xulashooyinka SEO-saaxiibtinimo. Xiriirka wada-hawlgalayaasha Monetizer-ku wuxuu siiyaa tirakoobka waqtiga-dhabta ah iyo soo-gudbinta, iyadoo la bixinayo toddobaadle bixinta dakhliyada la soo saaray ee lala-hawlgalayaasha
Waan naxay markii ugu horeysay ee aan bilowno Monetizer. Tiknoolajiyaddu waa mid la yaab leh, maadaama ay lacag ka dhigto taraafikada aan runtii la halgannay xilliyadii hore. - Bert Xia, Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga, HaaMobi
Saxiix u Samee Lacageed
Afeef: Monetizer waxay hadda ku socotaa ololeyaal xayaysiis ah bartayada (taasi waa sidaan ku ogaaday!)
Tags: tiro xayeysiis ahtiro xayeysiis ahsi sax ahecpckororka kharashka-gujintatetrault ugu badanlacag sameeyeharaaga taraafikadawaa maxay haraadiga taraafikadayaahmobi
maqaal weyn oo ku saabsan sida diirada loo saaro taraafikada haraaga ah !! isku dayi doonaa !!